बर्तमान साहित्य: वर्तमान साहित्य , वर्ष -१,अंक-१
वर्तमान साहित्य , वर्ष -१,अंक-१
प्रगतिवादी साहित्य विशेष अङ्क
प्रगतिवादको सैद्धान्तिक परम्परा युवा कम्युनिस्ट
– प्रेमसागर पौडेल
साहित्य : संघर्ष र साधनका दुई रूप
– फैज अहमद फैज
प्रगतिवादी साहित्यिक मान्यता
– डा. यदु नन्दन उपाध्याय
प्रगतिवादी साहित्यका मान्यताहरू
– डी.आर. पोखरेल
प्रगतिवाद र साहित्य
– विष्णु प्रभात
प्रगतिवादी साहित्य र यसको विशेषता
– निनु चापागाईं
नयाँ जनवादी क्रान्तिमा साहित्य र कलाको भूमिका
जनताको साहित्य र साहित्यकार
– हरिबहादुर श्रेष्ठ
- डी.आर. पोखरेल
हुन त 'प्रगतिवादी' भन्ने शब्दावली हाम्रो परिवेशको चलेको शब्दमात्र हो। यसको तात्पर्य मार्क्सवादी वा समाजवादी यथार्थवादी सिर्जन प्रक्रियासँग नै सम्बन्धित छ। प्रगतिवादको अर्थ निरुपण गर्दै नेपाली बृहत् शब्दकोशमा भनिएको छ – 'साहित्यलाई समाजको उपज मान्दै सामाजिक यथार्थको अभिव्यक्तिमा जोड दिने, वैयक्तिक आनन्दलाई भन्दा समाजको भौतिक विकासलाई बढी महत्त्व दिने, मार्क्सवादबाट प्रभावित साहित्य सिद्धान्त' नै प्रगतिवाद हो र यही साहित्य सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने, यसको अनुयायी साहित्य नै प्रगतिवादी हो भनिएको छ। यो साहित्यको धाराहरूमध्येको एक धारा विशेष हो। जसरी अस्तित्ववादी, मनोविश्लेषणवादी, परिष्कारवादी धाराहरू छन्। यसैगरी प्रगतिवादी साहित्यधारा पनि आजको युगको एक प्रभावशाली धारा हो। तर आज प्रगतिवादी साहित्यप्रति नाक खुम्च्याउनेहरू पनि छन्। यसमा कलापक्ष कमजोर हुन्छ, राजनैतिक नाराहरू लेखिएका हुन्छन् भन्ने सोच राख्ने गरेको पाइन्छ। साहित्यको निरपेक्ष सत्ता हुन्छ, यो शाश्वत चरित्रको हुन्छ, यसमा विचार होइन कला हुन्छ, यो सबैका लागि हुन्छ भन्ने सोच्ने गरिएको पाइन्छ। अर्काेतिर यस धाराका अनुयायीमा पनि साहित्यको सापेक्षिक स्वतन्त्रता हुन्छ ,यो कलापूर्ण अभिव्यक्ति हो, यो समाजको गहन अध्ययन, उत्खनन्, यथार्थ चित्रण, उदात्त भावबोधन, प्रतिनिधि चरित्र चित्रण गर्ने साहित्यधारा हो भन्ने कुरामा ध्यान नपुर्‍याई केही उग्रअभिव्यक्ति, यान्त्रिकता, नारावादिता र सतही र सपाट अभिव्यक्ति र कलामा विचारको जबरजस्ती घूसपैठलाई नै आफ्नो अभीष्ट सिद्धि ठान्नेे सोच पनि रहेको छ। त्यसो भएकोले प्रगतिवादी साहित्यका मान्यता के– के हुन्? प्रस्तावना के के हुन्? भनेर यहाँ चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ।
क) साहित्य र कला पनि विचारधाराकै एउटा रुप हो, सहज ज्ञान वा अनुभूतिका तत्वद्वारा निर्देशित कुरा होइन। मार्क्सवादी साहित्य चिन्तकहरूले सूत्रबद्ध गरेको पहिलो प्रस्तावना हो यो। यस प्रस्तावनाअनुसार कला पनि विचारधाराकै उपज हो। अझ त्यतिमात्र नभई यो विचारकै एउटा रुप हो। यो अनुभूतिको वा सहज्ञानको कुरो होइन। किनभने दृष्टिकोण नभएको चिन्तन वा चेतना नभएको स्रष्टा हुँदैन। उसले कुनै घटना वा चरित्रको चित्रण गर्दा त्यसको वर्णन र विश्लेषण गर्दा के आधारमा गर्छ? ऊसित कुनै चिन्तन नै छैन भनेपछि उसले कुनै घटना वा चरित्रको चित्रण नै गर्नसक्दैन। जसरी पशुपंक्षीले गर्नसक्दैन। सामान्य अनुभूति भनेको कुनै घटना, वस्तु वा चरित्रको प्रत्यक्ष ज्ञान हो। यो मस्तिष्कमा परेको पहिलो दृश्य हो। यसलाई तुरुन्त तार्किक ज्ञानमा फेरेपछि त्यो अभिव्यक्तिको बाटो भएर बाहिर प्रकट हुन्छ। अनुभूतिले मात्र साहित्यिक अभिव्यक्तिको निर्माण हुँदैन। अनुभूतिहरू तार्किक ज्ञानको माध्यमबाट अवधारणाको स्तरमा उठ्छन् र अझ त्यसमा परिष्कार आएपछि त्यसले चिन्तनको रुप लिन्छ र त्यो विस्तारै सिद्धान्त वा विचारको रुपमा स्थापित हुन्छ। यसरी जीवन र जगत्लाई हेर्ने दृष्टिकोण निर्माण भएर वस्तु र घटनाबारे एउटा स्पष्ट धारणा बनेपछि मात्र त्यसले अभिव्यक्तिको रुप लिन्छ। अब अभिव्यक्ति कलाको पनि प्रश्न छ। सीपको प्रश्न छ। यो सबै साधनद्वारा समृद्ध हुँदै अघि बढ्ने गर्दछ। त्यसकारण अनुभूति चिन्तनको सहायक कुरो हो। जहाँसम्म सहज ज्ञान (आत्मज्ञान) को कुरो छ यो भने वैज्ञानिक तर्कद्वारा पुष्टि गरिएको कुरो होइन।
ख) साहित्य र कला समाजको आर्थिक–भौतिक जीवको उपज हो र त्यसमै आधारित हुन्छ। जब मानव चेतना नै भौतिक परिवेशको उपज हो भने साहित्य र कलामात्र त्यसबाट अलग हुनसक्तैन। कहिल्यै पनि हिमाल नदेखेको कलाकारले हिमालको चित्र बनाउँदा कस्तो बनाउला?
पाश्चात्य सभ्यतामा हुर्किएको एउटा युवकले नेपाली वर्णाश्रम, छुवाछुत र जातभातको भेदभावबारेमा के कविता कोर्नसक्ला? सामन्तवादी सोच प्रणाली भएको समाजले के समाजवादी चिन्तनलाई चित्रण गर्नसक्ला? पशुहरूले यदि भगवानको फोटो बनाए भने कस्तो बनाउलान्? मान्छेले आफूजस्तै दुईखुट्टे भगवान बनाउन सक्छ भने पशुहरूले चार खुट्टे भगवान नबनाउलान्। यस्तै गरी लडाइँको बेलामा के मानिसको शृङ्गारिक साहित्य लेखी बस्ला? गणतन्त्र आएपछि पनि के नेपाली साहित्यको मूलधारको राजतन्त्र चन्द्रसूर्य रहेसम्म निर्विकल्प रहन्छ भनेर लेख्न सक्लान्? त्यसकारण साहित्य र कला परिवेशका उपज हुन् र त्यसमै आधारित पनि रहेका हुन्छन्।
ग) आर्थिक–भौतिक परिवर्तन हुनासाथ साहित्य, कला र विचारधाराका अन्य क्षेत्रमा धेरथोर परिवर्तन त्यही रफ्तारमा हुन्छ। उदाहरणको निम्ति राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आउनेबित्तिकै नेपाली स्रष्टाहरूले पनि गणतान्त्रिक साहित्यिक उत्सव मनाए। रफ्तार त त्यही नै रह्यो। साहित्यिक अभिव्यक्तिहरू फेरिए। यो एउटा उदाहरणमात्र हो। वास्तवमा आर्थिक – भौतिक धरातलमा परिर्वतन आउनासाथ साहित्य र कलामा पनि परिर्वतन देखापर्ने नै गर्छ। सुस्ता समस्यामा चितवनबाट कति देशभक्तिका कविताहरू लेखिए। सीमा समस्याबारे आज कति साहित्य लेखिइरहेका छन्। यो उदाहरण नै यसको लागि काफी छ।
घ) मानव सचेतनाको भूमिकाः भौतिक–आर्थिक परिवर्तन त भयो तर त्यसप्रतिको संवेदनशीलता भएन वा मानव चेतना त्यहाँसम्म उठ्न सकेन भने भौतिक परिवर्तनले त्यति ठूलो प्रभाव छोड्दैन। यसमा मानव चेतनाको भूमिका रहन्छ। जस्तो भनौं केही वर्ष अघिसम्म जातीय पहिचान खोज्ने आजको चेतना थिएन। अनेक दुःख सहेर जातजातिहरू बसेका थिए। तर २०४६ को जनआन्दोलनले जातीय चेतनालाई बढायो। मानिस शिक्षित र संवेदनशील भएपछि परिवर्तनलाई त्यही उचाइमा ग्रहण गर्ने
ङ) साहित्य र कला परिववेशबाट प्रभावित हुनेमात्र नभई त्यसले परिवेशलाई प्रभावित पनि पार्छ। सामाजिक क्रान्ति र समाजको पुनःनिर्माणमा साहित्य र कलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ, परिवेशबाट जुन कला चेतनाको निर्माण हुन्छ यसले समाज परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। आन्दोलनले जब समाजवादी चेत पैदा गर्‍यो, त्यसले गरीब र धनीको दूरीलाई चित्ताकर्षक ढङ्गले चित्रण गर्‍यो। उत्पीडन, शोषण, दमन र गरिबीलाई सर्वसाधारणले पनि बुझ्ने गरी प्रष्ट्यायो। मन छुने गरेर अभिव्यक्ति पस्कियो। कविता, कथा, गीत, नृत्य, नाटक आदिका माध्यमबाट असलप्रति आदर र कमसलप्रति घृणाको कोमल भावहरूलाई जन्मायो। यसले निश्चय नै समाज परिवर्तनमा भूमिका खेल्यो वा खेल्ने गर्छ। यसरी समाजको रुपान्तरणमा साहित्य एक सशक्त हतियार सावित हुन्छ र भएको छ।
च) साहित्य र कलाको उद्भव र विकासमा श्रमको ठूलो भूमिका छ। श्रमद्वारा नै हातमा त्यो शक्ति र क्षमता आएको छ जसले कलाको निर्माण गर्दछ। विकासवादी सिद्धान्तअनुसार मानव जङ्गली युगबाट विकसित हुँदै मनुष्य हुन आइपुगेको हो। पहिले त उसको हातले कलम समाउने, चित्र कोर्ने त कता हो कता, पाकेको फल टिपेर पनि खान जान्दैनथ्यो। यसका लागि हजारौं वर्ष उसले कठिन सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो। हातमा सीप ल्याउनलाई लामो समयको अभ्यासको जरुरत पर्‍यो। तर जब हात स्वतन्त्र भयो र कलम समात्न सक्ने भयो, यसपछि यस कलमले समाजोपयोगी कलाको उत्पादन गर्नथाल्यो। घर बनाउने सीप, जहाज बनाउने सीप, धनुस्काँड बनाउने सीपदेखि कम्प्युटर बनाउने सीपसम्म मानव हात आइपुग्दा यसले निर्माण गरेका सीप र वस्तुहरूले समाजको स्वरुप कसरी फेर्दै ल्याए। असभ्य मानव जाति आज सभ्यताको कति चरम अवस्थामा आइपुगेको छ। यो सबैमा श्रमको ठूलो भूमिका रहेको छ।
छ) पशुपक्षीहरू र मानिसमा ठूलो भिन्नता छ। पशुपक्षीहरू आफू र आफ्ना सन्तानका निम्ति क्रियाशील हुन्छन् तर मानव भने आफ्नो सन्तान, जाति, राष्ट्र र सबैका निम्ति काम गर्छन्। यसरी अर्काका लागि समेत मानिसले श्रम गर्ने, उत्पादन गर्ने हुनाले यसले स्वतः सौन्दर्य रचनाको नियमको निर्माण गर्दछ। यो प्रस्टै छ, आफ्नो सन्तानका लागि मात्र क्रियाशील हुने पशुपक्षीमा त्यो विशालपना, त्यो उदात्तपना, त्यो निःस्वार्थपना, त्यो उदारभावना र त्यो निर्वैयक्तिक उच्च भावनाले जन्मन नै पाउँदैन। जब मानव जातिमा यो जन्मिन्छ, उसको जीवन जिउने कला कति उँचो बन्छ। उँचो वस्तुको सौन्दर्य तत्त्व पनि त उँचो हुन्छ।
ज) शैली मानव व्यक्तित्वको पर्याय हो। यो स्वतन्त्र लेखनमा नै झ्याङि्गन्छ। कसैको दबाब वा विवशतामा गरिएको सिर्जनामा मौलिक शैली प्रकट हुनसक्तैन। नेपाली प्रगतिवादी साहित्य सिर्जना प्रक्रियाको एउटा प्रवृत्ति के छ भने साहित्यभित्र सिद्धान्तलाई जबरजस्ती खाँद्ने। यसो गर्दा स्रष्टाको मौलिकता प्रकट नहुने, त्यो दबिन जाने र सिर्जना यान्त्रिक बन्नेतर्फ मार्क्सवादी साहित्य चिन्तकहरूले पहिले नै विचार गरिसकेको देखिन्छ। दबाब र विवशतामा गरिएको सिर्जना मौलिक नहुने र स्रष्टाको व्यक्तित्व पनि प्रस्ट नहुने चिन्तनबारे समस्त प्रगतिवादी फाँटका नेपाली सर्जकहरूले एकपटक पुनः सोच्नुपर्ने देखिन्छ।
झ) कलात्मक प्रतिभा सीमित व्यक्तिमा मात्र हुन्छ भन्ने होइन। श्रम विभाजन र अवसरहरूको असन्तुलित अवस्थामा मात्र थोरै मानिसलाई प्रतिभा देखाउने सहुलियत प्राप्त हुन्छ। समाजमा पक्षपात नहुने, विसङ्गत अवस्था नहुने र सबैले समान अवसर पाउने हो भने जो कोही पनि बलाकार हुन सक्छ। यसमा फरक के छ भने केही जेनेटिक फ्याक्टरले गर्दा कलाका पनि एउटै क्षेत्रमा सबैको उत्तिकै अभिरुचि नहुन सक्छ। कोही मूर्तिकलामा पारङ्गत हुन्छन् भने कोही सङ्गीत कलामा। कोही बन्छन् भने कोही नर्तक बन्छन् र कोही शास्त्र विज्ञ बन्छन् भने कोही उपयोगी कुरामा माहिर बन्छन्। तर अवसर नपाएपछि त देवकोटाको शब्दमा – 'हाम्रा शेक्सपियरहरू हलो जोत्न मै विवश रहन्छन्।' यसरी प्रगतिवादी कला चिन्तनले ज्यादै फराकिलो परिप्रेक्ष्यमा मानव जातिको कला र साहित्यको विकासबारे आफ्नो वैज्ञानिक धारणाहरू प्रस्तावको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। यति गहन, यति मानवीय, यति सिर्जनशील, यति वस्तुनिष्ठ र समग्रतावादी साहित्यिक सोच सम्भवतः अन्य साहित्यिक चिन्तनधाराहरूमा पाउन सम्भव छैन।
प्रगतिवादी साहित्यधाराका यी सोचहरू अर्थात् यी प्रस्तावनाहरू ज्यादै गम्भीर कोटीका छन्। दार्शनिक तहका छन्। श्रमबाट नै मानवले कला र सीप आर्जन गरेको हो र उचित वातावरण पाउँदा जो कोही पनि साहित्यकार कलाकार बन्नसक्छ। साहित्यकार, कलाकार हुनलाई विशेष प्रतिभा चाहिने वा जन्मसिद्धी कुनै योग्यता चाहिने नभई मानव प्रतिभा र क्षमता परिवेशसितको साक्षात्कारबाट निर्माण हुँदै जाने कुरा हो। उचित वातावरण पाएमा जोसुकै पनि साहित्यकार, कलाकार बन्नसक्छन्। स्रष्टाले आर्जन गरेको कला क्षमताले समाज परिवर्तनमा पनि भूमिका पुर्‍याउनसक्छ। समाजको भौतिक र आर्थिक परिवर्तनसँगै त्यही रफ्तारमा साहित्य कलामा पनि परिवर्तन आउँछ र यसलाई ढिलो–चाँडो र स्तरीय अस्तरीय बनाउने कार्य भने मानवको सचेतनामा नै भरपर्दछ।
आन्दोलनले नयाँ कुरा दिएको छ तर समाजसित ग्रहणीय क्षमता आएको छैन भने त्यो तुहुन सक्छ। यसैगरी शैली व्यक्तित्वको पर्याय भएको र उसको मौलिकता दबाब र विवशताबाट प्रकट हुनसक्तैन। स्वतन्त्रतामै यो झ्याँगिन्छ भन्ने भनाइले साहित्यको सापेक्षिक स्वतन्त्रतालाई आंैल्याएको छ। मूल रुपमा साहित्य र कला पनि विचार नै हो र यो अनुभूति र सहज ज्ञानबाट निर्देशित कुरो होइन भन्नेजस्ता जेजति प्रस्तावनाहरू प्रस्तुत भएका छन् यिनको गम्भीर अध्ययन, मनन र अवलम्बन हुनु नितान्त जरुरी छ।
मान्छे स्वभावैले प्रगतिप्रेमी हुन्छ। वर्ग विषमताले चिरिएको समाजमा प्रगतिको परिभाषा भने आ–आफ्नै वर्गस्वार्थ अनुकूल लगाइन्छ। महलिया र दरबारियाहरूले प्रगतिको अर्थ आफ्नो मनपरीतन्त्रलाई टिकाउनका निम्ति जनसमुदायलाई भ्रममा पार्ने सुधार लगाउँछन्। विशाल श्रमजीवी जनसमुदाय त्यस भनाईसँग सहमत हुँदैनन्। गुणात्मक परिवर्तनका निम्ति सदैव क्रियाशील रहने मानव सभ्यता र संस्कृतिमा नयाँ नयाँ उपलब्धिहरू थप्दै अघि बढेका श्रमजीवी जनताले भने प्रगतिको अर्थ मानव जातिले आर्जन गरेको समस्त ज्ञानविज्ञानद्वारा–जीवनलाई भौतिक र बौद्धिक रूपले समृद्ध पार्दै, मानव समाजका विसंगतिलाई निर्मूल पारी प्रकृतिमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो भन्ठान्छन्। यही अन्तरले गर्दा अघिल्ला थरी मानिसहरूले आध्यात्मिक आदर्शवादी विश्व दृष्टिकोण अंगाली यथास्थिति वा सुधारसम्म नै आफूलाई सीमित राख्दछन् र पछिल्ला थरीले चाहिं क्रमशः द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोण अंगाली गुणात्मक परिवर्तनलाई नै प्राप्त गरी छाड्छन्। प्रगतिका निम्ति आफ्नो बल बुद्धि खियाउने व्यक्तिहरू हरेक युगमा जन्मन्छन् र हरेक क्षेत्रमा नयाँ नयाँ आविष्कारहरू हुँदै जान्छन्। पुरानोलाई परिष्कार मात्र नगरी कतिपयलाई निषेध पनि गर्दै जान्छन्। पुरानो माथि नयाँको जीत, अज्ञानमाथि ज्ञानको विजय र प्रकृतिमाथि मानव जातिको प्रभुत्वले प्रगतिको निरन्तरता कायम गरेको छ। कला साहित्यको क्षेत्रमा पनि हिजोको यथार्थवाद क्रमशः पछि पर्दै गैरहेको छ। र आज एउटा नयाँ सौन्दर्य–बोध गराउँदै समाजवादी यथार्थवाद अघि लम्कँदै आइरहेको छ। मार्क्सवादी सौन्दर्यशास्त्रका रूपमा यसैलाई प्रगतिवाद भनिन्छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणको सहारामा वर्ग सचेत श्रमजीवी जनताले देखे भोगेका यथार्थलाई अंकित गर्दै अघि बढ्ने सांस्कृतिक आन्दोलनका रूपमा यो हुर्किरहेको छ। कलालाई जीवनसँग र जीवनलाई समाजसँग जोडेर हेर्नु, वर्तमानमा उभिएर हुर्कंदै गरेको नयाँ भविष्यलाई उद्घाटन गर्नु, अनि इतिहासको गौरवगाथालाई सकारात्मक गति प्रदान गर्दै मानव जातिको हितमा सम्पूर्ण रूपले समर्पित हुनु प्रगतिवादको उज्जवल परम्परा बनेको छ। व्यापक जनताको हितमा वैज्ञानिक ज्ञान, भविष्यप्रतिको विश्वास र सर्वहारावर्ग परकतालाई अंगाल्दै सिद्धान्त र व्यवहारको एकता कायम गराउनु यसका मौलिक विशेषता हुन्।
मार्क्सवादी दर्शनको उदय अघि देखा परेको हेगेलीय द्वन्द्वात्मक आदर्शवाद र फायरवाखको आध्यात्मिक भौतिकवादले जसरी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनको निम्ति केही पूर्वाधारहरू दिएका थिए। त्यसरी नै समकालिन अन्य साहित्य चिन्तकहरूका सांस्कृतिक रचनाहरूले पनि कला साहित्यका क्षेत्रमा प्रगतिवादी मान्यतालाई हुर्कनमा ठूलो देन दिएका छन्। त्यति भएर पनि मार्क्सवादी दर्शनको अभावमा सुसम्बद्ध वैज्ञानिक प्रगतिवादी सांस्कृतिक आन्दोलन चलाउन सकिएको थिएन। अतितमा आदर्शवादी दर्शनको आध्यात्मिक हेराईले गर्दा जीवन र जगतलाई वास्तविक रूपमा बुझ्न नसकेर कलाकर्मीहरूले काल्पनिक शक्तिको आराधना गरे। यथार्थको दुःखपूर्ण चित्र देख्दा अत्यन्तै संवेदनशील भए पनि वर्ग विषमताको कारण ठम्याउन सकेनन्। पदार्थ र चेतनाको आपसी सम्बन्धलाई नदेखि त्यसलाई एक अर्काबाट अलग्याए, श्रमको भूमिका र महत्वलाई बुझ्न सकेनन्। जसले गर्दा कला साहित्यको मूल्यांकनमा सामाजिक मूल्यको उपेक्षा गरियो। पंूजीवादी साम्राज्यवादी संस्कृतिले पनि कलाको सामाजिक मूल्यप्रति उपेक्षा त गर्छ नै तर आधुनिकताको नाउँमा बेग्लै ढंगले मार्क्सवादी दर्शनको उदयले नौलो संस्कृतिको सिर्जना र निर्माणमा जुटेका असंख्य श्रमजीवी जनतालाई भौतिकवादी दर्शनको द्वन्द्वात्मक हेराई दियो। प्रकृति र मानव समाजलाई फेर्ने उत्तरदायित्व समेत उनीहरूका काँधमा सुम्पियो। आदर्शवादी संस्कृतिले थोपरेको गलत मान्यतालाइ धज्जी उडाउँदै प्रगतिवाद गर्जियो पदार्थको शास्वत अस्तित्व नै जगतको मूल तत्व हो। एकतामा अनेकता र अनेकतामा अन्तर सम्बन्धलाई ठम्याएर कला साहित्यको प्रयोजन मानव जीवनको जगेर्ना, उन्नति र सेवाका निम्ति हुनुपर्छ भन्दै प्रगतिवाद लम्कियो। यसले सत्यको अन्वेषण तथ्यद्वारा गर्ने, विकास र परिवर्तनको मूल तत्वलाई गतिशील पार्न सक्रिय रहनुपर्ने र उत्पादन शक्ति, साधन र सम्बन्धलाई ठम्याउनु पर्ने र सामाजिक प्रगतिको बाधक शक्तिको विरूद्ध खडा हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि रचनाकर्मी सामु राखिदियो। जसले गर्दा लेखक कलाकारहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रतिबद्ध बन्दै गए।
हुन त बाहिरी वातावरणको हेरफेरले भित्री विचारमा पनि हेरफेर ल्याउने हुँदा सिर्जनाको एक मात्र आधार चेतना बन्न सक्दैन, तैपनि रचनाको उद्देश्यले नै रचनाकारलाई डोर्‍याउने हुँदा सिर्जनामा लेखकका निम्ति कुनै पनि ज्ञान सिद्धान्तले निर्देशकको भूमिका खेलेको हुन्छ। किनकि सिद्धान्तले नै व्यवहारलाई बाटो देखाउँछ। त्यसरी नै सिर्जनामा सर्जकको अनुभव, ज्ञान, कल्पनाशक्ति र रचना सामर्थ्यको पनि महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ। तर पनि सही दृष्टिकोणको अभावमा वस्तुगत जगतका जटिल समस्याहरूलाई राम्ररी अध्ययन गरी ठीक ढंगले विश्लेषण गर्न सकिंदैन। पदार्थको भित्री बहिरी अवस्था र तिनीहरूबीचको अन्तर सम्बन्धबारे सही समक्ष प्राप्त भएन भने अनुभूतिको रूपमा संकलित ज्ञान पनि साँचो बन्न सक्दैन। वस्तुगत यथार्थको वास्तविक अनुभूतिबिना संकल्पले जतिसुकै प्रेरित गरे पनि कलाकारले कलाको आधार प्राप्त गर्न सक्दैन किनकि वास्तविक अनुभूति नै सिर्जनाको आधार हो। मानवीय क्रियाकलापका अनुभवसिद्ध सार बनिनसकेका विचार सिद्धान्तहरू सही छन् वा गलत भनी सु73म ढंगले अध्ययन नगरी वास्तविक अनुभूति प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले व्यवहारसिद्ध ज्ञानबिना वास्तविक अनुभूति सम्भव छैन र सबै संकल्प र सपनाहरू पनि साकार बन्दैनन्। वस्तुगत यथार्थका ऐतिहासिक उपज बनेका मानवीय आकांक्षाहरू ले मात्रै आखिरमा मूर्तरूप लिएका हुन्छन्। मानवीय संकल्प र आकांक्षाहरू पनि एक अर्काबाट अलग र बेग्लाबेग्लै खालका हुन्छन्। जसले गर्दा रूची र खाँचो पनि फरक फरक बन्छन्। त्यति भएर पनि ती सबैलाई भौतिक आवश्यकताद्वारा डोर्‍याएर नै इतिहासका हरेक घटनाहरू घटेका हुन्छन्। मानव समाजमा आर्थिक आवश्यकताले नै प्रमुख स्थान राख्दै आएको छ। त्यसकारण संकल्प र साधनाले मात्र सिर्जना सम्भव छैन। सिर्जनाका निम्ति यथार्थको सु73म अध्ययनबाट प्राप्त रचनात्मक अनुभूतिको निरन्तर आवश्यकता पर्दछ, जसले समस्याको समाधानमा सधैनै प्रेरणा प्रदान गर्दछ।
यसरी सिर्जनामा अनुभूतिलाई महत्व दिनुको तात्पर्य बौद्धिकताको विरोध होइन। प्रगतिवाद, प्रत्यक्षबोध र तार्किकता मध्ये कुनै एउटालाई बढीजोड दिने कुराको विरोधी छ। किनकि यी दुवै अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्। त्यस्तै मानवीय आकांक्षालाई यथार्थमा फेरिन नसक्ने ठान्नु वा तिनीहरूले नै यथार्थको ठाउँ लिन्छन् भन्ठान्नु पनि गलत छ। विचार भौतिक जगतको प्रतिविम्ब भएर पनि जनसमुदायको मस्तिष्कमा घुसेपछि भौतिक शक्तिमा फेरिन्छ। हाम्रो सामु विज्ञान र प्रविधिका अनमोल उपलब्धिहरू यसरी नै रहेका छन्। भौतिक यथार्थ पनि विविध रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ। प्रकृति र समाजको यथार्थ स्थायी अस्थायी दुवै रूपमा रहन्छ। यथार्थ स्वयं गतिशील छ, आजका कतिपय यथार्थहरू भोलि फेरिन्छन्। हाम्रो यथार्थ हाम्रै धर्ती र आकाश हो, हाम्रै जीवनका उकाली ओराली हुन्, जहाँ राष्ट्र र जातिका विशिष्टता माझ निरन्तर गतिशील बन्दै लम्केका दुःखसुखहरू, आँसु र हाँसोको संगम अनि उजेली र अँधेरीको लुकामारी छ। तर यो साह्रै नै विसंगतिपूर्ण पनि छ। यहाँका सबै उत्पादन साधन र स्रोतमाथि सानो संख्याका ठूला सामन्तहरू र दलाल नोकरशाही पूंजीपतिको स्वामित्व छ। उत्पादक शक्तिको विकासमा बाधक बनेको संरचनाले असमान वितरण प्रणालीलाई टेवा दिएको छ र त्यसको फलस्वरूप शिक्षा, संस्कृति र समस्त ज्ञान विज्ञानमा वर्गीय द्वन्द्व कायम भएको छ। मानव जातिको इतिहास आफै नै वर्गसंघर्षको इतिहास रहेको ऐतिहासिक सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रा विचारधारामा पनि वर्गसंघर्षको त्यो छाप त्यतिबेलादेखि नै पर्दै आएको छ जतिबेलादेखि मानव समाजमा वर्गहरूको अस्तित्व देखा पर्‍यो। त्यसैले हाम्रो चेतना वर्गपरक छ यही वर्गपरकतामा मार्क्सवादी दर्शनको साहित्यधारा बनेको छ–प्रगतिवाद।
प्रगतिवाद सर्वहारा संस्कृतिको सिद्धान्त हो। यो सामाजिक परिवर्तन र विकाससँग गाँसिएको छ। त्यसैले यसका दुई पक्षहरू छन्–निषेधात्मक र सिर्जनात्मक अर्थात् प्रगति विरोधी तत्वको ध्वंस र प्रगतिमुखी शक्तिको विकास। कला, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति र सामाजिक नैतिकताका थुप्रै विषयलाई यसले समृद्धितर्फ डोर्‍याउँछ। मानिसले हरेक थरीका सामाजिक व्यवस्थामा बटुलेका ज्ञानहरूको स्वाभाविक विकासले नै यसलाई जन्म दियो। प्रगतिवादले मानवीय नैतिकतालाई पालन गर्दछ। मान्छेलाई मान्छेका रूपमा बाँच्नका निम्ति एकताबद्ध गर्दै सबै खो शोष48का विरूद्धमा जुधी न्यायपूर्ण, गतिशील र समुन्नत समाजको स्थापनामा टेवा दिन्छ। सिद्धान्तलाई व्यवहारदेखि अलग राख्ने पुरानो समाजको गलत परम्परालाई तोडेर विचारलाई भौतिक शक्तिमा बदल्ने प्रयत्न गर्दछ। संस्कृतिका सबै उपलब्धिहरूलाई श्रमजीवी जनसमुदायको हितमा लगाउँछ। ज्ञान, विज्ञान र कलालाई मानव जातिको हितमा लगाई सिर्जनशील प्रतिभाको उच्च कदर गर्दछ। सबै खाले अज्ञानका विरूद्धमा खडा भै राजनैतिक चेतनाको ज्योतिमा श्रम सौन्दर्यबोध गराउँछ। यसले निम्न पूंजीवादी सोचाई र अनैतिकता माथि विजय प्राप्त गर्ने हुँदा विश्वका हरेक कुनाकाप्चातिर पनि आफ्नो भलमलाउँदो किरणलाई फिजार्दै गैरहेको छ। हरेक राष्ट्रका जनतालाई झक्झक्याउँदै व्यूँझाए, अन्धकारमा भड्किरहेकालाई युग ज्योतिक किरण थमाएर क्रमशः उजेलोतिर लैजाँदैछ। विश्वमा देखा परेका परम्परागत ज्ञानको अवैज्ञानिकता, विसंगति र एकलकाँटेपनको खन्डन गर्दोछ। न्याय, समानता र प्रगतिको निम्ति व्यक्तिलाई समाजको हितमा, पूंजीलाई मानव जातिको हितमा र चेतनालाई प्रकृति जित्नमा लगाउने प्रभावशाली हतियार बनेर काम गरेको छ। वास्तवमा प्रगतिवादले संस्कृतिलाइ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक संरचनाको प्रतिविम्वका रूपमा लिने हुँदा वास्तविकतालाई नांगो रूपमा हैन, बहुसंख्यक जनताको हितमा कलात्मक ढंगले उद्घाटन गर्दछ। कलाको वर्गपरकतालाई पक्षधरतामा सीमित नगरी सर्वहारावर्ग चेतनाले सुसज्जित गर्दछ। जनसमुदायबाट लिने र जनसमुदायलाई दिने क्रममा नराम्रोलाई हटाउँछ, राम्रोलाइ अघि बढाउँछ। समकालीन उत्पादन सम्बन्धले निर्धारण गरेको चेतनामा आधारित हुँदै प्रगतिवादले सामाजिक विकासको इतिहासलाई भौतिकवादी दृष्टिले हेर्छ। हरेक वस्तु वा घटना विकासको इतिहासलाई भौतिकवादी दृष्टिले हेर्छ। हरेक वस्तु वा घटना प्रक्रियालाई द्वन्द्वात्मक तरिकाले विश्लेषण गर्दछ। त्यसैले साहित्य सिर्जनामा पनि हारजीत, उज्यालो अँध्यारो, सबल–निर्बल दुवै पक्षलाई समेटेर सिंगो जीवन ठड्याउँछ। जनताको नयाँ सांस्कृतिक सिद्धान्तका रूपमा रहे पनि मार्क्सवादी दर्शन, राजनीति र अर्थशास्त्रसँग प्रगतिवाद अविभाज्य बनेको छ। यसले वर्गचेतनामा व्यूँझदै गैरहेको विश्वमा सामन्तवाद, पूंजीवाद र साम्राज्यवादका दुर्बल साङ्लाहरू चुँडाल्दै मानव जातिको पूर्ण स्वतन्त्रताका निम्ति अघि लम्कन प्रेरित गर्दछ। रचनाकर्मीको सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतालाई कदर गर्दै सर्वहारा मानवतावादको आधारमा विश्वबन्धुत्व कायम गर्न लगाउँछ। जनतासँगको सरल आदान प्रदानले गर्दा प्रगतिवादी रचनाहरू बढी संप्रेषणशील हुन्छन्। यिनै कुराहरूका आधारमा गोविन्द भट्ट भन्नुहुन्छ–“वैज्ञानिकता, जनउपयोगिता र प्रभावकारिताका दृष्टिबाट सिर्जित प्रगतिवाद नै विसौं शताब्दीको सर्वोत्कृष्टवाद हो।”
हाम्रो देशको वर्तमान सांस्कृतिक आन्दोलनका सन्दर्भमा प्रगतिवाद नेतृत्वदायी विचारधारा हो। यसले अझै केही समयसम्म अर्थात् नौलो जनवादी क्रान्ति र निर्माणकालसम्म अन्य सहयोगीहरूलाई समेत सहयात्रीका रूपमा डोर्‍याउनै पर्दछ। समाजवादी क्रान्ति र निर्माणकालमा भने सांस्कृतिक आन्दोलनको यो दिशा अलि बेग्लै हुनेछ। त्यतिबेला यसको स्वरूप विषयवस्तुमा नौलो जनवादी र शैलीमा राष्ट्रिय हुनुको सट्टा समाजवादी राजनीति र अर्थतन्त्रको प्रतिविम्ब बोकेको वैज्ञानिक समाजवादी राष्ट्रिय संस्कृति हुनेछ र विश्व संस्कृतिसँग क्रमशः एकाकार बन्दै जानेछ।
सिर्जनामा सिद्धान्तको महत्वलाई जोड दिंदा केही मानिसहरू प्रगतिवादले परिवर्तनको आधारका रूपमा युग चेतनालाई मान्दछ भन्ने झुा आरोप पनि लगाउँछन। वास्तवमा यसले भौतिक जीवनका अन्तरविरोधहरू यर्थात् समाजको उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध बीचको टक्करलाई परिवर्तनको आधार मान्दै युग चेतनाको व्याख्या गर्दछ। फेरि कोही के पनि भन्दछन् भने –“प्रगतिवादले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र वैयक्तिक वैशिष्ठ्य हनन गर्दै कला साहित्यलाई राजनीतिको प्रचार साधन बनाउँछ।” साँचो कुरा के हो भने संसारका सबै कला साहित्य वा सांस्कृतिक रचनाहरूले कुनै न कुनै रूपमा खास वर्गको दर्शन, राजनीति र अर्थतन्त्रको सेवा गर्दै आएका छन् र कुनै न कुनै हेतुका प्रचार सा नबनेका छन्। यस वास्तविकतालाई लुकाउन नै उनीहरूले यो हल्ला चलाएका हुन्। कलाको सामाजिक मूल्यलाइ उपेक्षा गर्नेहरूले आफूलाई यस सच्चाइमा नबाँधिएकै हुन्छन्। फरक यत्ति हो–प्रगतिवादीहरू खलस्त रूपमा स्वीकार्छन्, उनीहरू स्वीकार्दैनन्। विषयवस्तुका निम्ति रूपको वा रूपका निम्ति विषयवस्तुको उपेक्षा गर्ने दुवै गलत प्रवृत्तिबाट जोगिएर नयाँ संस्कृतिलाई हुर्काउने प्रगतिवादलाई कसै कसैे प्रगतिशीलताको अथमा लिएको पाइन्छ। यो तिनीहरूको भ्रम हो। प्रगतिवाद र प्रगतिशीलतामा तात्विक अन्तर छ। नेपाली प्रगतिवादी सिर्जनाले खासगरी तीसको दशकबाट तीब्र गतिमा विकास गर्दै जनसमुदायमा व्यापक प्रभाव पार्न थालेको छ, गीत, कविता, नाटक, अनुवाद, समालोचना र संस्मरण विधाहरूमा नयाँ नयाँ प्रतिमान स्थापित हुँदैछन् र हाम्रो प्रगतिवादी कला साहित्य क्रमशः प्रौढतातिर लम्कँदो छ।
- निनु चापागाईं
१. विषयको थालनी
नेपाल र नेपाली जनताको अर्धसामन्ती एवम् अर्ध/नवऔपनिवेशिक शोषण–उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र विस्तारवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । के कुरा निश्चित हो भने नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि गाउँले शहर घेर्ने रणनीतिमा आधारित दीर्घकालीन जनयुद्ध आवश्यक पर्दछ । यसका निम्ति बन्दूकधारी सेनाको भूमिका प्रमुख देखिन आउँछ । परन्तु के पनि त्यतिकै निश्चित हो भने मान्छेको दिल र दिमाखबिना हातले मात्र बन्दूक चल्न सक्दैन । बन्दूक समाउने हातहरु क्रियाशील एवम् जुझारु बनाउन आवश्यक हुन्छ । ठीक यसैकारण क्रान्तिका लागि बन्दूकधारी सेनाका साथै संस्कृतिधारी सेनाको पनि आवश्यकता पर्दछ र क्रान्तिमा कलासाहित्यले यसै संस्कृतिधारी सेनाको भूमिका खेल्दछन् ।
साहित्य र कला समाजको आर्थिक जगमा खडा उपरिसंरचनाका विशिष्ट रुप हुन् । राजनीति, दर्शन, कानून, साहित्य–कला आदिको विकास आर्थिक विकासमा आधारित हुन्छ । परन्तु ती सबैले एकअर्कोलाई प्रभावित पनि पार्दछन् । सामाजिक चेतनाको निर्माण सामाजिक सत्ताबाट हुन्छ र सामाजिक सत्ताको रुपान्तरणका लागि सामाजिक चेतनाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । वस्तुको चेतना र चेतनाको वस्तुमा रुपान्तरण हुन्छ ।
माओ भन्नुहुन्छ– “आजको दुनियाँमा सम्पूर्ण संस्कृति र कलासाहित्य निश्चित वर्गहरुका नै हुन्छन् । तिनलाई निश्चित राजनीतिक कार्यदिशा अनुरुप ढाल्ने गरिन्छ । वास्तवमा ‘कलाका लागि कला’को सिद्धान्त मान्ने कला, वर्गहरुभन्दा माथि रहने कला र राजनीतिबाट अलग रहने अथवा स्वतन्त्र रहने कला नामको कुनै चीज हुँदैन । सर्वहारावर्गको कलासाहित्य सम्पूर्ण क्रान्तिकारी कार्यको एक अंग हो, लेनिनका शब्दमा त्यो सम्पूर्ण क्रान्तिकारी मेसिनका दाँती र पेचकै समान छ ।”
हामीले नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिमा साहित्यकलाको भूमिकाबारे उल्लेख गर्दा उपर्युक्त माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी मान्यतालाई दह्रोसँग पकड्न जरुरी छ । आज नेपाली साहित्यकला आन्दोलनका सामु अनगिन्ती समस्या खडा छन् । ती सबैको यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव छैन । परन्तु सर्वाधिक महत्वका समस्याहरुबारे आवश्यक छलफल र अन्तक्र्रियासहित सहि निष्कर्षमा पुगेपछि नै जनवादी क्रान्तिमा यसको भूमिकाको पक्ष राम्ररी स्पष्टिनेछ ।
२. साहित्यकलाको विकासको दिशालाई बझ्ने समस्या :
नेपालमा लामो समयदेखि साहित्यकलाको फाँटमा प्रतिगामी, प्रगतिवादी र संशोधनवादी धाराहरुबीच सङ्घर्ष चल्दै आएको छ । यस सङ्घर्षमा प्रतिगामी तथा प्रगतिवादी धाराबीच प्रमुख अन्तरविरोध रहेको छ र यसले नै साहित्यकला आन्दोलनको गति र दिशालाई प्रभावित पार्ने निर्धारक कारकको काम गरेको छ ।
सामन्ती आभिजात्यवाद र बुर्जुवा आधुनिकतावादको मिलनबाट प्रतिगामी धाराको निर्माण भएको छ । स्तुतिवाद, धार्मिक मतवाद, वर्गसमन्वयवाद, यौनवाद, शून्यवाद, निराशावाद, पलायनवाद, विसङ्गतीवाद, व्यवसायवाद यस धाराका स्वर र प्रवृत्तिगत मूल विशेषता हुन् । प्रयोगवाद र रुपवाद यसका शिल्पगत मान्यता हुन् । यस धाराले आफुमा सड्दैगल्दै आएका सामन्ती हिन्दू धार्मिक मतवाद तथा श्रृङ्गारवाद, साम्राज्यवादी–फासीवादी भ्रष्टता, यौनवाद, अराजकता र भारतीय विस्तारवादी र रहस्यवाद तथा अंश्लीलताका साथै संशोधनवादका सामाजिक साम्राज्यवादी–फासीवादी अधःपतनका समग्र विकृत एवम् मरणाशील तत्वहरुलाई सारसङ्ग्रहवादी ढङ्गले समाहित गरेको छ । यसले गतिशील यथार्थ होइन, भ्रमको, जनहितको होइन निजी हितको, सौन्दर्य होइन कुरुपताको चित्रण गर्दछ । सामन्त, नोकरशाह एवम् दलाल पूँजीपति वर्ग, त्यसको सत्ता र वर्तमान राजतन्त्रतात्मक संसदीय व्यवस्थाको सेवा तथा जनता र क्रान्तिको विरोध गर्नु त्यसको मूल उद्देश्य हो । यद्यपि नेपालको कला साहित्यमा यो धारा अवश्यै प्रभावी रहेको छ, परन्तु यो स्वयं सङ्कटग्रस्त छ । यो अन्तर्वस्तु र रुप, आत्मगत र वस्तुगम, पक्ष, स्वतन्त्रता र आवश्यकतावीचका अनेकौँ अन्तर्विरोधहरुमा उम्कनै नसक्ने गरी फँस्तै गएको छ ।
प्रतिगामी धारा विपरीत नेपाली जनताको वर्गसङ्घर्षको विकासको गतिसँगै लोककला र जनवादी परम्पराका ऐतिहासिक सामग्रीलाई परिमार्जित गर्दै तथा सर्वहारा समाजवादी यथार्थवादी धारासँग आबद्ध हुँदै नेपालमा लामो समयदेखि प्रगतिवादी तथा नयाँ जनवादी कला र साहित्यको धाराले आफ्नो क्रान्तिकारी झण्डा उठाउँदै आएको छ । सङ्घर्षका क्रममा यसले आफुलाई राम्रोसँग स्थापित गरिसकेको छ । रुप र सङ्ख्याका दृष्टि तुलानात्मक रुपमा कमजोर रहे पनि सार र गुणका दृष्टिले यो मजबुद बन्दै गएको छ । नेपाली समाजको विकास सिङ्गो भावधारा र भविष्यलाई कलात्मक अभिव्यक्ति यसै धारामा छ । यहि जिम्मेवारी र दिशाबोधका साथ यो प्रभावी ढङ्गले अघि बढिरहेको छ ।
संशोधनवादी र प्रगतिवादी धाराबीचको अन्तविरोध नेपाली कलासाहित्य फाँटको आजको अर्को अन्तरविरोध हो । संशोधनवाद सारतः प्रतिगामी चिन्तनकै एउटा रुप भएकोले यसको आफ्नै स्वतन्त्र मौलिक विशेषता हुन्न । यसले रुपमा प्रगतिवादी र सारमा प्रतिगामी धाराबाट सामग्री जुटाउने गर्दछ । त्यसैले यो स्वभावतः सारसङ्ग्रहवादी हुन्छ । वर्गसङ्घर्षका विरुद्धमा वर्गसमन्वयमा जोड दिनु, क्रान्तिकारी विचारधारा, राजनीति र सौन्दर्यचिन्तनको अर्थात् माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी सौन्दर्यदृष्टिको विरोध तथा विकृतीकरण गर्नु, प्रगतिवादी र प्रतिगामी मान्यताबीच निकै अमूर्त बनेर प्रस्तुत हुनु, निष्क्रियता, तटस्थता, उदासिनता र उदारतामा जोड दिनु, यौनवाद, बुर्जुवा मानवतावाद र रुपवादको पक्षपोषण गर्नु र क्रान्तिकारी कलासाहित्यलाई जड्सूत्रवादी तथा यान्त्रिकतावादी बताउँदै भँडुवा विकासवादी सिर्जनशीलतामा जोड दिनु यस धाराका मूल विशेषता हुन् । आज नेपालमा संशोधनवादको अर्थात् पक्षधर लेखक–कलाकारहरुको एउटा ठुलो हिस्साले प्रतिगामी धाराका सामु आत्मसमर्पण गरी आफुलाई उल्टो दिशामा रुपान्तरण गरि सकेको छ । आज यसरी साहित्य र कलाको फाँटमा विद्यमान संशोधनवादले एकातिर सङ्कटग्रस्त प्रतिगामी फाँटमा आवश्यक मलजल हालेर त्यसलाई पुनर्जीवित गर्ने र अर्कोतिर जीवनशील प्रगतिवादी फाँटमा विभिन्न ढङ्गका भ्रमहरु सिर्जना गर्दै त्यसलाई दिशा बिहिन तुल्याउने द्वैध प्रकारका भुमिका–निर्वाह गरिरहेको छ ।
यो स्थितिमा विचारधारा र कलासिर्जना दुवै क्षेत्रमा प्रतिगामी एवम् संशोधनवादी धाराद्धारा खडा गरिएको थप समस्या र चुनौतीहरुको सामना गर्ने कुरामा ध्यान दिँदै क्रान्ति र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोधलाई गम्भीरताका साथ हृदयङ्गम गरी अघि बढ्ने काममा प्रगतिवादी धाराका लेखक–कलाकारहरु अत्याधिक सचेत, क्रियाशील र दृढ रहन जरुरी छ ।
३. साहित्यकलाको भूमिकालाई ठीकसित बुझ्ने समस्या :
क्रान्तिका लागि साहित्यकलाले के कस्तो भूमिका खेल्न सक्तछ ? यो समस्यालाइ माथिका विषय र सन्दर्भहरुसँगै गाँसेर हेर्नुपर्छ । प्रतिक्रियावाद, संशोधनवाद र सम्पूर्ण खाले जीवनविरोधी प्रवृतीहरुसँग सङ्घर्ष नचलाई र वैचारिक तथा भावनात्मक रुपान्तरणको दिशामा समाहित नभई साहित्यकलाले नयाँ जनवादी क्रान्तिमा आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने नै हुन्छ । त्यसैले यी दुवै आधारभूत समस्याहरुको सहि ढंगले बोध गर्दै तथा तिनको समाधान गर्दै साहित्यकलाको जसरी र जुन क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्तछ, त्यस पक्षलाई यहाँ निम्नानसार बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ :
१. शोषण, उत्पीडन, अशिक्षा र गरिबीले ग्रस्त जनतामा सरल र प्रभावकारी रुपमा जीवनको मूल्यबोध गराउनु ।
२. जनताका दुश्मनप्रति घृणा र मित्रहरुप्रति प्रेमभाव जगाउँदै वर्गचेतना जागृत गर्नु ।
३. जनताको रुचि, भावना तथा संस्कारसंग संबन्धित सकारात्मक पक्षलाई विकसित गर्ने, कमजोर पक्षलाई हटाउने र उनीहरुको वैचारिक तथा भावात्मक रुपान्तरण गर्ने काममा मद्दत पु¥याउनु ।
४. जनतामा धनीभूत ढंगले सामूहिक भावधाराको सृष्टि गर्नु तथा सौन्दर्यचेतना जगाउनु ।
५. जीवन र क्रान्तिको भविष्यबारे आशावादी दृष्टि अवलम्वन गर्न प्रेरित गर्नु ।
६. क्रान्तिको आवश्यकताबोध र समाज–रुपान्तरणका लागि जनतालाई सचेत एवम् क्रियाशिल बनाउनु ।
सामाजिक चेतनाका अन्य रुपहरु भन्दा भिन्न साहित्यकलाद्धारा यो भूमिका दुई रुपमा सम्पन्न हुन्छ–पहिलो, विशिष्ट अर्थबोध, भाषा, शब्द, ध्वनि तथा रंगरेखाको अभिव्यक्तिका बीचबाट र दोस्रो, सौन्दर्यबोधीय नियमका माध्यमबाट । यस अर्थमा साहित्यकलाको आफ्नै विशिष्ट स्वत्व हुन्छ । परन्तु त्यो निरपेक्ष र विशुद्ध हुन सक्तैन । संज्ञानात्मक, विचारधारात्मक, सांस्कृतिक एवम् सौन्दर्यपरक ढंगले जीवनको मूल्यबोध गराउनु र प्रशिक्षित गर्नु साहित्यकलाको विशिष्ट कार्य हो । आजको जमानामा साहित्य र कलाको क्षेत्रमा यसप्रकारको भूमिका निर्वाह गर्न काम जीवनबाट पृथक यान्त्रिक भौतिकवादी आदर्शवादी एवं. सौन्दर्यवादी लेखक–कलाकारद्वारा होइन, सामाजिक जीवन र वर्गसंघर्षको भावधारालाई कलात्मक ढंगले प्रतिबिम्बित गर्न समर्थ द्वन्द्वात्मक एवं, ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणले समृद्ध लेखक–कलाकारद्वारा नै सम्पन्न हुनसक्छ । क्रान्ति र सौन्दर्यबोधबीच घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ । साहित्य र कला वर्ग संघर्षमा संलग्न जनता र जनयोद्धाहरुका सामूहिक मनोभावनाका प्रतिबिम्ब नै हुन्, जसले मूल कार्य वर्गीय सम्बेदनालाई प्रखर, प्रभावी र घनीभूत ढंगले अभिव्यक्ति दिनु हुन्छ । यसको उद्देश्य जनता र क्रान्तिको सेवा गर्नु हुन्छ । नेपाली प्रगतिवादी कला साहित्यले यही भूमिका खेल्दै आएको छ र आजको नेपाली समाजको वर्ग संघर्षको भावधारालाई यसले अझै सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
४. वैचारिक तथा भावनात्मक रुपान्तरणको समस्या
वैचारिक तथा भावनात्मक रुपान्तरण एक वर्गको अर्को वर्गमा रुपान्तरण हो । यो उल्टो र सुल्टो दुवै दिशामा सम्पन्न हुन सक्छ । क्रान्तिको जटिल स्थितिमा कैयौं गैरसर्वहारा वर्गीय लेखक कलाकारहरु सर्वहारा र कैयौं प्रगतिवादी लेखक–कलाकारहरु गैरसर्वहारा पङ्क्तिमा सामेल हुन पुग्छन् । नेपालमा पनि यस्तो हुँदै आएको छ । वर्गसङ्घर्षका आरोह अवरोहका क्रममा यस्तै भइरहन्छ । परन्तु माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी दृष्टिकोणको मूलभूत मान्यता के हो भने पुँजीवादले समाजवाद र समाजवादले साम्यवादमा फड्का् हान्छन् । यसरी हेर्दा भावनात्मक रुपान्तरणको सिद्धान्तलाई उल्टो होइन सुल्टो अर्थमा ग्रहण गर्नुपर्दछ ।
वैचारिक तथा भावनात्मक रुपान्तरणको समस्या सौन्दर्यचिन्तनको केन्द्रीय समस्या हो । यो व्यक्तिको समूहमा, व्यक्तिगत भावको सामूहिक भावमा, व्यक्तिवादको समाजवादमा, गैरसर्वहारा वर्गको सर्वहारा वर्गमा र अन्ततः वर्गीयताको वर्गविहीनतामा रुपान्तरण र पुनःसंस्कारसँग सम्बन्धित समस्या हो ।
क्रान्तिकारी साहित्य–कलामा अभिव्यक्त भावधारा कुनैपनि व्यक्तिपरक भावधारा नभई सामुहिक भावधारा हुन्छ । भावको साधारणीकरण वा प्रारुपीकरणबाट जनताको मनोभावको एउटै भावधारामा सामान्यिकरण हुन पुग्छ । त्यो बेला हजारौं, करोडौं दिल दिमागहरुले दुश्मनप्रति घृणा र मित्रहरुप्रति प्रेम गर्न थाल्दछन् । जनतामा भित्री हृदयदेखि नै वर्ग चेतना जागृत भएर आउँछ । यो स्थितिमा जनताले आफ्नो जीवनको मूल्यबोध गर्दछ । ऊ केवल तटस्थ प्रेक्षक वा द्रष्टा भएर बस्दैन, समाजकै रुपान्तरण र उदात्त आदर्शका लागि सचेत एवं क्रियाशील बनेर वर्गदुश्मनका विरुद्ध सङ्घर्षमा भिड्दछ । मुक्ति सङ्घर्षको योद्धा बन्नुलाई उसले गौरवको विषय ठान्दछ र त्यसैमा आनन्दानुभूति प्राप्छ गर्छ । यसरी जनताको रुचि, संस्कार र भावनामा रुपान्तरण हुँदै जान्छ । क्रान्तिमा साहित्य र कलाले ठीक यसै भूमिका निर्वाह गर्दछन् ।
जनताको वैचारिक तथा भावनात्मक रुपान्तरणका लागि स्वयं लेखक कलाकारहरुको भावनात्मक रुपान्तरण एक अनिवार्य आवश्यकता हो । यस प्रकारको रुपान्तरण चरणवद्ध रुपमा हुँदै जाने प्रक्रिया हो । यस निम्ति विविध सङ्घर्ष र आन्दोलनका आवश्यकता पर्दछ । वैचारिक तथा भावनात्मक रुपान्तरणका क्रममा निम्न कुरामाथि ध्यान दिन जरुरी छ ।
१) माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र त्यसप्रकारमा सिद्धान्तमा आधारित सौन्दयचिन्तनलाई आत्मसात गर्नु ।
२) नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको तथा दीर्घकालीन जनयुद्धको राजनीतिक तथा फौजी कार्यदिशाको महत्वलाई बुझ्दै त्यसै दिशामा ढालेर कलाकृतिको सृष्टि गर्नु ।
३) सांगठनिक हुनु र एकता, सङ्घर्ष रुपान्तरणको प्रक्रियालाई राम्रोसँग अवलम्बन गर्नु ।
४) वर्गसङ्घर्षको बीचमा जानु, जनताको बीचमा जानु, सिक्नु र सिकाउनु ।
५) नयाँनयाँ कृतिको सृष्टि गर्दै एकपछि अर्को छलाङ हान्दै अघि बढ्नु ।
६) संशोधनवाद, नवसंशोधनवादका विरुद्ध जुध्दै जानु ।
यस अतिरिक्त आज हामीले विश्वमा भइरहेका समाजवादी तथा नयाँ जनवादी आन्दोलन, पेरु, फिलिपिन्स, भारत लगायतका विभिन्न देशहरुको जनयुद्धका संस्कृति अनुभवहरुबाट पनि आफूलाई समृद्ध पार्दै जाने काममा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । विश्व सर्वहारा वर्गका आजका सजिव, सांस्कृतिक अनुभवहरुले हामीलाई रुपान्तरित बनाउनका लागि राम्रो मद्दत पुर्याउँछन् ।
क्रान्तिको उज्ज्वल भविष्यप्रति वैज्ञानिक आशावादी दृष्टि नै एक यस्तो कुँजी हो, जसले हरेक लेख, कलाकारहरुलाई रुपान्तरिक हुन भित्री हृदयदेखि नै प्रेरित गर्दछ । आज हामीलाई यसै दृष्टिको आवश्यकता छ ।
५.संयुक्त मोर्चाको समस्या :
नयाँ जनसांस्कृतिक आन्दोलनमा मूलतः वैचारिक तथा भावनात्मक रुपान्तरणकै समस्यालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । तर साथै क्रान्तिका लागि साहित्यकलाको फाँटमा संयुक्त मोर्चा पनि एक जरुरी सवाल र आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई बिर्सन हुँदैन । हाम्रो विचार वा मान्यतासँग पूरै वा अंशतः सहमत हुन नसक्ने परन्तु विभिन्न ढंगले क्रान्तिमा सघाउ पु¥याउने र अन्य कैयौं देशभक्त जनवादी वा वामपन्थी लेखक, कलाकारहरुप्रति प्रशस्तै छन् । हामीले ती सबैसँग मिलेर काम गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । यस निम्ति एक भरपर्दो संयुक्त मोर्चा आवश्यक बन्न गएको छ । क्रान्तिको आवश्यकताअनुरुप विभिन्न समयमा विभिन्न ढंगका संयुक्त मोर्चा बन्न सक्दछन् र तिनका मागहरु पनि फरकफरक हुने गर्दछ । परन्तु पहिले नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिले जुन संयुक्त मोर्चाको अपेक्षा गरेको छ, त्यस निम्ति निम्न बुँदामा समान सहमतिको आधार खोज्न सकिन्छ ।
१) देशीय सामन्तवाद विरुद्ध जनवादी क्रान्तिका लागि सहमति ।
२) साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति संघर्षका लागि सहमति ।
३) सामन्ती, धार्मिक रुढिवादी, भ्रष्ट पुँजीवादी एवं सबैखाले अवैज्ञानिक तथा हैकमवादी चिन्तन र मूल्य मान्यताका विरुद्ध वैज्ञानिक चिन्तन र मूल्य मान्यताको स्थापनाका लागि सहमति ।
४) वर्ग समन्वयवाद तथा शान्तिपूर्ण संक्रमणको सिद्धान्त मान्ने संशोधनवादी चिन्तनको विरुद्ध नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिका लाथि जनयुद्धको भूमिकाप्रति सहमति ।
यस निम्ति हरेकले हरेकको स्वतन्त्रताको कदर गर्र्दै तथा परस्पर मैत्रीपूर्ण आलोचना चलाउँदै जानुपर्छ । यसबारे अन्तरक्रियाको थालनी गर्नु आवश्यक छ ।
प्रतिगामी साहित्यकलाको धाराले उपर्युक्त विषयलाई ठीक विपरीत दिशामा प्रवाहित गर्ने काम गर्दै आएको छ । यसको मूल उद्देश्य जनताको रुचि, भावना र संस्कारलाई सामन्तवादी, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी स्वार्थअनुरुप सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको हितअनुरुप ढाल्दै लग्नु र जनतालाई क्रान्तिप्रति विमुख तुल्याउनु हो ।
नेपालमा लामो समयदेखि साहित्यकलाका फाँटमा संशोधनवादको अस्तित्व पनि कायम रही आएको छ र आज यसले प्रतिक्रियावादको सेवा गरिरहेको छ । प्रतिगामी धाराका साथै संशोधनवादी धाराको पनि मूल उद्देश्य जनतालाई दिग्भ्रमित पार्दै प्रतिगामी वर्गको सेवा र क्रान्तिको विरोध गर्नु हो ।
आज नेपालको कला साहित्य फाँटमा प्रतिगामी र प्रगतिवादी धाराबीचको अन्तरविरोध नै प्रधान अन्तरविरोध हो । यी दुई भिन्न धाराका कला साहित्यले पनि ठीक यसरी गुणात्मक ढंगले भिन्न भूमिका खेलिरहेका छन् । संशोधनवादी धारा यी दुई बीचमा खेल्ने गर्छ । परन्तु यस धाराका कैयौं लेखक कलाकारहरु प्रतिगामी कित्तामा गिर्दै आएका छन् र आज यो क्रम निकै तीव्र भएको छ । यो स्थितिमा प्रगतिवादी धाराका सामु आज क्रान्तिका लागि निकै ठूलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी खडा छ । तसर्थ यस धाराका लेखक कलाकारहरुले आफ्नो सही भूमिका निर्वाह गर्नका लागि प्रतिगामी तथा संशोधनवादी धाराका विरुद्ध संघर्ष चलाउनुका साथै जीवन र कला, अन्तरवस्तु र रुप, सरल र स्तरीयता, स्वतन्त्र र प्रतिबद्धताबीच द्वन्दात्मक सम्बन्ध कायम गर्दै रचनाको निर्माण र प्रसारण गर्ने काम अत्यधिक सचेत र क्रियाशील हुन जरुरी देखिन्छ ।
आज आवश्यकता विविध विधाहरुको सृष्टि र विकास गर्नुका साथै गीत, संगीत, नाटक र नृत्य फाँटमा विशेष ध्यान दिनुमा छ । किनभने जनता जगाउने कार्यमा यिनकै भूमिका प्रभावी हुँदै आएको छ । त्यसका साथै मगर, गुरुङ, लिम्बु, तामाङ, थारु, मैथिली, नेवारी, नेपाली आदि सबै भाषामा रचना सृष्टि गरी विविध जातिका जनतालाई ब्युँझाउनेतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । लोक कला र लोक शैलीको आज प्रतिगामी कित्ताबाट धेरै नै उपेक्षा हुँदै आएको छ । यसको संरक्षण, परिमार्जन र विकासबारे पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । किनकि क्रान्तिका लागि लोक कला र लोक शैलीको भूमिका विशिष्ट हुन्छ ।
मूलतः उपयुक्त प्रकारको संघर्ष र सिर्जनात्मक कार्यको सम्पादनबाटै नयाँ जनवादी क्रान्तिमा कला साहित्यको सांस्कृतिक सेनाको भूमिका सम्पन्न हुनसक्दछ ।
नयाँ जनवादी क्रान्तिमा साहित्य कलाको भूमिकाबारे यसरी जुन कुरा उल्लेख गरियो । त्यसमा कैयौं महत्वपूर्ण कुरा छुट्न गएका छन् । आवश्यता, बहस र अन्तरक्रियाका बीचबाट नै चिजलाई बढी परिस्कृत तुल्याउन र समस्याहरुको समाधान गर्दै जान सकिनेछ । आज नेपाली क्रान्तिको प्रगतिवादी लेखक, कलाकारहरुसँग आआफ्ना कलम, कुची र मादल बोकेर पट्यारलाग्दो निरन्तरता तोड्दै वर्गसङ््घर्षका बीचबाट गुणात्मक ढङ्गले नया नयाँ कृतिहरुको सृष्टि गरी जनता ब्युँझाउनका लागि जोडदारा आह्वान गरिरहेको छ । त्यसलाई सबैले अत्यधिक गहिराइका साथ हृदयंगम गर्नु नै अहिलेको हाम्रो प्रमुख काम हो ।
- हरिबहादुर श्रेष्ठ
साहित्यका थुप्रै विधाहरू छन्। सबैजसो शिक्षितहरूले साहित्यका कुनै न कुनै विधामा रुचि राख्छन्। अपवाद विरलै होला। मानिसहरूलाई साहित्य पढ्न जति रुचि हुन्छ साहित्यकार बन्ने चाहना पनि त्यतिकै प्रवल हुन्छ। त्यसैले अधिकांश शिक्षितहरूले साहित्यका कुनै एक विधामा कलम चलाएकै हुन्छन्। कतिपयका कलम तिखारिँदै जान्छ र स्थापित हुन्छ भने कतिपयका कलम छिट्टै बोधो हुन्छ र हराउँछ। साहित्यकार बन्न चाहने र साहित्यकार बनिसकेकालाई समेत यो पुस्तकले आफूलाई कस्तो र कसको लागि साहित्यकार बन्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर र प्रेरणा दिन्छ।
'साहित्य के हो?' यस पुस्तकको पहिलो विषय हो। यसमा समाज दुई वर्ग चुसाहा वर्ग र चुसाएर बस्ने वर्गमा विभाजित भएको व्याख्यासहित ती वर्गको परिचय दिइएको छ। शोषक वर्गले आफ्नो हुकुमलाई कायम राख्न तरवारको बलले मात्र शोषित वर्गलाई दबाउन नसकेपछि साहित्यको राजनीति गर्छ भनी लेखिएको छ। साहित्य राजनीतिको हतियार भएकोले साहित्य पनि वर्गीय हुने तथ्य स्पष्ट गरिएको छ। यसरी साहित्य र कला राजनीतिबाट अलग हुन्छन्, साहित्य स्वान्तसुखायको लागि हो जस्ता भ्रमलाई चिर्दै कामदार वर्गको साहित्यले वर्गीय चेतना फैलाउँदै वर्गसङ्घर्षलाई बढाउने प्रभावशाली हतियार हो भनी ठोकुवा गरिएको छ।
'प्रतिक्रियावादी र प्रगतिशील साहित्य' शीर्षकमा लेखकले ती दुवैको सरल भाषामा उदाहरणसहित परिचय दिएका छन्। ती साहित्यका आ–आफ्ना उद्देश्य र प्रभावको व्याख्या गर्दै प्रतिक्रियावादी साहित्यले समाजको प्रगतिमा तगारो हाल्ने र प्रगतिशील साहित्यले जनता अर्थात् देशका बहुसङ्ख्यक किसान–मजदुर र कामदार जनताको सेवा गर्ने ठहर प्रस्ट लेखिएको छ।
'साहित्यले जनताको कसरी सेवा गर्छ?' शीर्षकमा सङ्घर्षशील जनताको पक्षमा लेखेर साहित्यकारहरूले जनताको सेवा गर्छन्। यस्ता साहित्यले जनताको मनोबल उठाउँछ। शोषक, अन्यायी, अत्याचारी, आक्रमणकारीहरूको विरोधमा लेख्नु जनताका लेखक, कवि र कलाकारहरूको काम हो भनी लेखकले साहित्यकारहरूलाई घच्घच्याएका छन्।
'पात्र र पात्रको चुनाव' शीर्षकमा साहित्य 'समाजको ऐना' मात्र बनाउन नहुने, वर्गसङ्घर्ष र जनताको जनवाद ल्याउने सङ्घर्षको एक सशक्त हतियार बनाउनुपर्छ भन्ने लेखकको ठम्याइ छ। आफ्नो रचनाका पात्र जीवनबाटै चुने पनि जस्ताको तस्तै प्रस्तुत नगरी आफ्नो कलाबाट ज्यान थपिदिनु र चम्काइदिनु नै लेखक, कलाकारको काम हो।
'पात्रहरूको चुनावबारे' शीर्षकमा पात्रहरू जीवन सङ्घर्षबाटै प्राप्त गर्नुपर्ने र यसका लागि लेखक कलाकारहरू सङ्घर्षमै जानुपर्छ भनी लेखकले औंल्याएका छन्। सङ्घर्षमा होमिएका र खारिएका लेखकले नै जनतामा प्रभाव छोड्ने जीवित पात्र चुन्न सक्छन् भन्ने लेखकको ठम्याइ छ।
'हामी आदर्शवादी वा यथार्थवादी?' शीर्षकमा आदर्श शब्द अर्थ्याउँदै उदाहरणीय र अनुकरणीय पात्र र साहित्यको पक्षमा उभिँदै जनताका साहित्यकारहरू आदर्शवादी पनि हुन्छन् भनिएको छ। साथै यथार्थमा आधारित आदर्शवादी साहित्य र आदर्शले सिंगारिएको यथार्थवादी साहित्यले जनताको सङ्घर्षलाई सहयोग पुर्‍याउने लेखकको निचोड छ।
'के सबै यथार्थवादी साहित्य प्रगतिशील हुन्छन्?' शीर्षकको रचनामा एक समयको प्रगतिशील साहित्य अर्को समयमा जतिसुकै यथार्थवादी भए पनि प्रगतिशील नहुने सत्य उघारिएको छ। दास युगमा लेखिएका सामन्तवादी साहित्य र सामन्ती युगमा लेखिएका पूँजीवादी साहित्य समयकालको आधारमा प्रगतिशील हुन्छ तर समाजवादी युगमा ती सबै साहित्य यथार्थवादी भए पनि प्रगतिशील हुन नसक्ने र नहुने विश्लेषण गरिएको छ। सारमा सबै यथार्थवादी साहित्य प्रगतिशील हुँदैनन् भनी ठोकुवा गरिएको छ।
'के सबै प्रगतिशील साहित्य मार्क्सवादी हुन्छन्?' शीर्षकमा 'सबै मार्क्सवादी साहित्य प्रगतिशील हुन्छन् तर सबै प्रगतिशील साहित्य मार्क्सवादी हुँदैनन्' वाक्यबाट रचना सुरु गरिएको छ। प्रगतिशील भन्नासाथै युग र समयको तुलनाको कुरा आउँछ भने मार्क्सवादमा वर्ग र दर्शनको। प्रगतिशील तत्त्वहरूमा कम्युनिष्ट र मार्क्सवादीहरू सबैभन्दा अघिल्लो पङ्क्तिमा आउने र सबै वर्ग र दर्शनभन्दा मार्क्सवाद अगाडि बढेको हुनाले सबै प्रगतिशील साहित्य मार्क्सवादी हुँदैन तर सबै मार्क्सवादी साहित्य प्रगतिशील हुने दाबी गरिएको छ।
'यथार्थवादी साहित्यको विकास' शीर्षकमा दास र सामन्ती युगका साहित्यकारले ईश्वर, धर्म, स्वर्ग–नर्क आदि लेखेर राजामहाराजाहरूको गद्दी, शोषण, अत्याचारलाई जोगाउन काल्पनिक साहित्य लेखेर जनतालाई 'भेडो' बनाएका थिए। तर युग बदलियो, विज्ञानले प्रगति गर्न थालेपछि मानिसहरूमा चेतना बढ्यो, हेर्ने आँखा फेरिन थाले र भौतिकवादी दृष्टिकोण विकास भयो। त्यसैको परिणाम यथार्थवादी साहित्यको विकास भयो। (प्रकाशकीय टिपोटमा यो रचना अपुरो भएको उल्लेख छ।)
'उदाङ्ग्याउनुको अर्थ के हो?' शीर्षकको रचनामा लेखकले उदाङ्ग्याउनु अर्थात् शोषक वर्गका अन्याय, अत्याचार, अपराध आदिको पोल खोल्नु, नङ्ग्याउनुमात्र जनताका साहित्यकारको काम होइन भनेका छन्। त्यस्ता यथार्थलाई प्रस्तुत गर्नुका साथै शोषण, दमन, उत्पीडनविरुद्ध जनताको सङ्घर्षमा सहायक हुने विषयवस्तुलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। सारमा समाजलाई कसरी बदल्ने भन्ने मुख्य समस्याको समाधान दिनुलाई लेखकले उदाङ्ग्याउनु हो भनी अर्थ्याएका छन्।
'उदाङ्ग्याउने र खोट देखाउने कसरी?' शीर्षकमा लेखकले जनतामा चेतना र देशभक्ति भावना बढाउने, जनताका सङ्घर्ष र क्रान्तिलाइ सघाउ पुर्‍याउने ढङ्गले उदाङ्ग्याउने र खोट देखाउनुपर्ने बताएका छन्।
'जनताको खोट किन र कसरी देखाउने?' शीर्षकमा किसान मजदुरहरू पनि समाजकै उपज भएकाले समाजका खराबीहरूबाट सबै मुक्त हुँदैनन्, सङ्घर्ष गर्न जानेका हुँदैनन्, राज्यसत्ता कब्जा गर्ने अनुभवको कमी कमजोरीलाई छलफल, आलोचनाबाट तिनीहरूलाई सुधार्ने, नयाँ जोश थप्नेतर्फ खोट देखाउने क्रममा जनताका साहित्यकारहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषय औंल्याइएको छ।
'जनताको साहित्यकार कसरी बन्ने?' शीर्षकमा कामदार वर्गको पक्षमा कलम चलाउने साहित्यकारमात्र जनताको साहित्यकार हुने स्पष्ट गर्दै लेखकले जनताको साहित्यकार हुन सबभन्दा पहिले जनताको माझमा जानुपर्ने र जनताको समस्यालाई लिएर लेखिएको साहित्यलाई जनताले मन पराउने र साहित्यकारलाई आफ्नो मान्छे ठान्ने स्पष्ट गरेका छन्।
'के जनताको साहित्य 'प्रचार साहित्य' हो?' शीर्षकमा विनाछलछाम 'जनताको साहित्य' जनताको प्रचार साहित्य' भएको स्वीकार गर्दै 'हरेक वर्गले साहित्यलाई आ–आफ्नो वर्गीय स्वार्थको ज्यावलको रुपमा उपयोग गर्दै आएको' तथ्यलाई स्पष्ट गरिएको छ। साहित्यलाई वर्ग र राजनीतिबाट अलग र चोखो भन्नेहरूले जालसाझी र बेइमानी गरेको ठहर गर्दै रामायण, महाभारत, गरुड पुराणलगायतका साहित्य दासमालिक, सामन्त र शोषक वर्गकै हित गर्ने 'प्रचार साहित्य' हो भनी ठोकुवा गरिएको छ। त्यसैले जनताको साहित्य शोषित, उत्पीडित र कामदार वर्गको 'प्रचार साहित्य' हो र दास मालिक, सामन्त, पूँजीपतिलगायतका शोषक वर्गका 'प्रचार साहित्य' कामदार वर्गका लागि कागजका खोस्टा हुन् भनिएको छ।
'साहित्यकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य' शीर्षकमा विकास र प्रगतिले एक देशका शोषक वर्गले अरु देशका जनतालाई समेत शोषण गर्ने, उपनिवेश बनाउँदै साम्राज्यवादको जाँतोमा पिल्सिने भन्दै विदेशी शोषक वर्ग, तिनका स्वदेशी दलाल र आक्रामक शक्तिको पक्ष र विपक्षमा सङ्घर्ष हुन्छ। उपनिवेशवादी र आक्रमणकारी देशमा पनि त्यहाँका शोषित–पीडित जनता सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्। अन्य देशमा पनि स्वतन्त्रता र मुक्ति आन्दोलन भइरहेको हुन्छ। कुनै पनि देश अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको प्रभावबाट अलग रहन सक्दैन। त्यसैले जनताका साहित्यकार, जनताको सेवा गर्न राजनीतिमा लागेकाहरूको विश्वका कुनै पनि भागमा स्वतन्त्रता र मुक्ति सङ्घर्षको समर्थन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य हो, त्यो समर्थन आफ्नै सङ्घर्षको सफलताको निम्ति पनि आवश्यक छ भनिएको छ।
'जनताको साहित्यमा कला पक्षको महत्त्व' शीर्षकको रचना पुस्तकको अन्तिम रचना हो। यसमा साहित्यमा कलापक्ष हुनैपर्छ, जनताको साहित्यमा पनि कलापक्ष रहेको छ भन्दै जनताको साहित्यको कलापक्ष सुनमा सुगन्ध हो, तीतो औषधिको चक्कीमा गुलियो पोतेको मीठो स्वाद हो भनिएको छ। शोषक वर्गको साहित्यमा पनि कला पक्ष छ तर त्यो 'विषको चक्कीमा गुलियो पोतेको मिठास हो।' यसरी जनतालाई हानि पुर्‍याउने कलाको पक्षमा लेखक नरहेको र जनताका साहित्यकारहरू भ्रममा पर्न नहुने स्पष्ट गरिएको छ।
शोषक वर्गका लेखक, समालोचकहरूलाई जनताको साहित्यमा कलापक्ष छ भन्नासाथ आफ्ना वर्गीय साहित्य खोस्टा, बोक्रे र खस्रा हुने डर रहेको सत्य पनि रचनामा उघारिएको छ।
सारमा भन्ने हो भने जनताको साहित्यमा विचार प्रवल हुन्छ, कलाको जलप हुन्छ जुन सामन्त र पूँजीवादीहरूको निम्ति कहिल्यै मान्य र ग्राह्य हुनसक्दैन। शोषक वर्गले जलप देखाएर पित्तललाई सुन भनी जनतालाई ठग्न र भ्रमित पार्न खोज्छन्। जनताको साहित्य र शोषक वर्गको साहित्यमा कला पक्षको मुख्य भिन्नता यही देखिन्छ।
लेखक हरिबहादुर श्रेष्ठले आजभन्दा चार दशकअघि साहित्यसम्बन्धी लेख र छलफलहरूको सङ्कलन गरी प्रकाशित यस सरल र सहज भाषाको पुस्तकको पृष्ठ ६८ रहेको छ। यस पुस्तकले स्थापित र नवोदित साहित्यकारहरूलाई पनि जनताको साहित्यबारे रचनात्मक र सिर्जनात्मक आलोक दिने र छर्ने आशा र विश्वास अझै गर्नसकिन्छ।
Posted by Hamro Sahitya at 1:50 AM